Dowlada Ethiopia oo sirasmi ah ula wareegtay hogganka IGAD (Sawiro) – Xeernews24
Dowlada Ethiopia oo sirasmi ah ula wareegtay hogganka IGAD (Sawiro)
Dalalka Kenya iyo Itoobiya ayaa qiil u samaystay sababta “ay u mudan yihiin” in ay inta badan hayaan labada xil ee ugu muhiimsan urur goboleedka IGAD, xilli dalalka kale ee IGAD aysan ku qanacsaneyn.
Dr. Workneh Gebeyehu oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa xilka xoghayaha fulinta IGAD waxa uu 7-dii bishan kala wareegay Maxbuub Macallin oo u dhashay Kenya, halka madaxweyne Uhuru Kenyatta la filayo inuu guddoomiyenimada kala wareego ra’iisul wasaare Abiy Ahmed.
Arrintan ayaa imaneysa in kasta oo ay jirtay diidmo xooggan oo ka imaneysay Soomaaliya iyo Jabuuti, oo doonayey mid ka mid ah labada xil ee ugu sarreeya ururka.
Hase yeeshee, sida uu qoray wargeyska Daily Nation, Nairobi iyo Addis Ababa ayaa ku dooday in maadaama ay yihiin labada dal ee lacagta ugu badan ku bixiya miisaaniyadda ururka, inay mudan yihiin labada xil ee ugu sarreeya.
Labada dal ayaa midkiiba waxa uu sanadkii miisaaniyadda ururka ku tabarucaa 2.7 milyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixinta Daily Nation.
Lacagtaas ayaa lagu kabaa kaalmo dhan 16 milyan oo dollar oo sanad kasta ururka uu ka helo deeq bixiyayaasha caalamka, ayada 2.33 milyan oo ka mid ah ay ka timaado Midowga Yurub.
Soomaliya iyo Jabuuti ayaa doonaya in xilalka ururka noqdaan kuwa wareegto ah, si dal kasta oo u sugto kolkiisa, hase yeeshee Kenya iyo Itoobiya ayaa taas kasoo horjeeda. Ma cadda waxa ay Soomaaliya iyo Jabuuti sameyn karaan si ay taas u dhacdo.
Sidda la wada og yahay ururkan IGAD waxaa lagu aasaasay magaalada Jabuuti waxaan aasaska ka odeyenaayey madaxwaynayaashi ee dalalka Jabuuti iyo Soomaalia Xassan Guuleed iyo Mohamed Siyaad Barre oo ay qaarabo hoose ahaayeen madaxda maanta ee dalalka Jabuuti iyo Soomaalia oo ururkii loogu awood sheegtay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/11/debre.png 470 648 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-11-09 18:01:572019-11-09 18:01:57Dowlada Ethiopia oo sirasmi ah ula wareegtay hogganka IGAD (Sawiro)
QM oo shaacisay natiijada baadhitaanka geeridii Morsi Sidee loo fuliyey dil... Qodobadii uu ku kacay Dhooba Daareed ee keenay in uu xilkiisa waayo+Video.